Mareykanka oo Sheegay in Duqeyn ay ka fuliyeen Somalia ay ku Dileen 150 ka tirsanaa Al-shabaab |
Mareykanka oo Sheegay in Duqeyn ay ka fuliyeen Somalia ay ku Dileen 150 ka tirsanaa Al-shabaab
Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa sheegtay in ugu yaraan 150-dagaalyahan oo Al-shabaab ka tirsan ay ku dileen duqeyn ay diyaaradahoodu ka fuliyeen Gudaha Soomaaliya.
Afhayeen u hadlay Pentagon-ka, Cap. Jeff Davis ayaa sheegay in Weerarka lala beegsaday Xero Tababar oo ay Al-shabaab lahayd, uuna weerarkani ahaa mid si weyn loo qorsheeyay.
“Weerarkan waxaa ku dhimatay 150 xubnood oo Al-shabaab ka tirsan, Waxaana og-nahay in ciidamada la tababarayay ay khatar ku yihiin Mareykanka iyo ciidanka Midowga Afrika ee Soomaaliya ku sugan,” ayuu afhayeenku ku yiri hadal uu warbaahinta siiyay.
Sidoo kale, Cap. Jeff Davis ayaa intaas ku daray in Weerarkaan ay si wadajir ah u fuliyeen Diyaaradaha Drones-ka ee aan Duuliyaha lahayn iyo kuwa kale ee dagaalka. wuxuuna lagu lagu beegsaday saldhig lagu magacaabo Raaso oo qiysastii 195-km Muqdisho kaga beegan dhanka Waqooyi, isagoo xusay in weerarkan uu dhacay Sabtidii.
Afhayeenka ayaa xusay in tababarka la siinayay dagaal-yahannada Al-shabaab uu ahaa mid Gunaanad ku dhowaa, ayna Qorsheynayeen in Weerarro ay Qaadaan, Inkastoo uusan bixin faahfaahin intaas ka badan.
Al-shabaab oo muddo sannado ah dagaal kula jirta dowladda Somalia iyo Ciidanka gacanta siinaya ee AMISOM, waxayna weerarro isugu jiray kuwo toos ah iyo qaraxyo Ismiidaamin ah ay ka fulisay deegaanno badan oo Soomaaliya ku yaalla, kuwasoo ay ku jirto Muqdisho.
Dhanka kale, Al-shabaab ayaan weli ka hadlin duqeyntan uu Mareykanku sheegay in ay ku dileen 150-ka xubnood ee Al-shabaab ka tirsanaa, kuwaasoo ku sugnaa saldhig Tababar oo ay Al-shabaab ku lahayd Gudaha Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, Ma ahan markii ugu horreysay oo Duqeymo noocaan ah ay la beegsadeen diyaaradaha duuliye laa’anta ah ee Mareykanka Madaxda iyo Dagaal-yahanada Al-shabaab, waxaana Mareykanka uu duqeyn ku dilay Bishii September ee 2014-kii Hoggaamiyihii Al-shabaab, Axmed Cabdi Godane iyo laba ka mid ah Abaanduulayaasha Al-shabaab